Imigca ejikelezayo esuka kuGoogle Earth-kumanyathelo ama-3-iGeofumadas
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/Imigca ejikelezayo esuka kuGoogle Earth-ngamanyathelo ama-3
Eli nqaku licacisa indlela yokuvelisa imigca yendlela ukusuka kwimodeli yedijithali kaGoogle. Kule nto siza kusebenzisa iplagi ye-AutoCAD.
Emva koko sikhetha inketho ethi "Nge-GE View" kwi-Terrain tab, iya kusicela ukuba siqinisekise ukuba amanqaku e-1,304 aya kuthunyelwa; emva koko iya kusicela ukuba siqinisekise ukuba sifuna ukuba imigca ye-contour yenziwe. Kwaye ulungile; Imigca yecontour yeGoogle Earth kwiAutoCAD.
Ukujongwa kwexesha-Iplagi yokufikelela kwimifanekiso yesathelayithi yembali nge-AutoCAD